Kedu ihe Social Media pụtara maka Ahịa Gị | Martech Zone
Anyị a ka na-achọ ịkọwa gị n'ime atụmatụ mgbasa ozi mmekọrịta? Achọghị m n'ezie - ọnụọgụ ahụ dị ma egosila. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ gị ejighị mgbasa ozi mmekọrịta, ndị na-asọmpi gị ga-enwerịrị. Anaghị m ekwupụta na mgbasa ozi mmekọrịta bụ ihe niile ndị gurus kwere ya ka ọ bụrụ - ịlaghachi na itinye ego na ya ka bụ ihe siri ike soro ma tụọ. Mana o wetela usoro dị mfe iji kparịta ụka gbasara ụlọ ọrụ na ụdị na ọrụ ha. Otu ụbọchị anaghị aga na netwọkụ m ebe ndị mmadụ anaghị arịọ maka aro ma ọ bụ tinye nsogbu nke ụlọ ọrụ gị nwere ike ịza. Nọrọ ebe ahụ!
Ihe omuma a site na Wikimotive na-ejegharị gị site na ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama metụtara ahịa na mgbasa ozi mmekọrịta. Ebumnuche Wikimotive bụ ịnye ngwọta ahịa ịntanetị zuru oke maka ebe mgbaba na azụmaahịa na nha niile.
Ọkt 25, 2013 na 3:37 PM
wow ụfọdụ n'ime eziokwu ndị ahụ m na-amaghị, dị ka nke ahụ Pinterest wetara 27% karịa ego site na pịa mgbe ahụ Facebook. Mgbasa mgbasa ozi bụ ngwá ọrụ dị ukwuu ma ọ bụrụ na iji ya nke ọma na nsogbu ahụ kachasị amataghị esi eji ya nke ọma. Anyị na-eme ike anyị niile iji nyere ụlọ ọrụ aka ịghọta etu esi eme ya nke ọma.